. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ပြောရဦးမယ်
ဟို ကျန်ခဲ့တဲ့ တပတ်က သူငယ်ချင်းတယောက် (သူငယ်ချင်းပဲ ဆိုပါတော့ .. ကိုယ်နဲ့ မခင်ပဲ ဒီကျမှ သူငယ်ချင်းနဲ့ အဖော်လိုက်ပြီး သူငယ်ချင်း ဖြစ်သွားတော့ သူငယ်ချင်းပေါ့နော် .. :P) ရန်ကုန်ကနေ အလည်လာလို့ ဆန်တိုဆာကို လိုက်ပို့ဖြစ်ပါတယ် .. ဆန်တိုဆာကို ရောက်တဲ့ အခေါက်တိုင်း တခါမှ ၀င်ကြည့်ဖို့ စိတ်မကူးခဲ့တဲ့ ရေအောက်ကမ္ဘာကို ၂၂ ကျပ် ပေးပြီး မိုက်မိုက်မဲမဲ ၀င်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် .. :P .. ဂယ်ပါ .. တခါပဲ .. နောက်ဘယ်တော့မှ မသွားတော့ဘူး .. ကံမကောင်းပုံက အဲဒီ လက်မှတ်ဝယ်ရင် လင်းပိုင်ပွဲကို ကြည့်လို့ရတာတောင် အချိန်ကို ငဲ့ကွက်သောအားဖြင့် မကြည့်ခဲ့ရတော့ ပိုလို့ကို မတန်တော့ပါဘူး .. (ပွဲချိန်လွန်သွားခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ် ..း()
လှသလားဆိုတော့ မဆိုးပါဘူး .. (မဆိုးဘူးလား ဆိုတော့ နဲနဲတော့ ဆိုးပါတယ် .. အရမ်းလည်းကျဉ်းပြီး စိတ်ထဲ ထင်မိတာက ဘာမှ မထူးဆန်းသလိုပါပဲ .. ဘာမှလည်း မရှိသလိုပါပဲ ..) စိတ်လေပြီး ခေါင်းမူးပြီး ပြန်ထွက်လာပါတယ် .. ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် ခေါင်းမူးသွားခံရတာပါ ..
အဲဒီသွားပြီး ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ကတော့ ဒီ ပြတိုက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သတ္တ၀ါတွေအနေနဲ့ကတော့ သူတို့ သက်တမ်းစေ့ နေသွားနိုင်မလားပဲ .. ဒီလိုဆို ပြင်ပက ချက်စားခံရမယ့် သတ္တ၀ါတွေထက် ကံကောင်းတယ် ဆိုရမလား ..
သူတို့ကိုယ်တိုင်ရော ဒီလိုကျဉ်းကျဉ်းကျပ်ကျပ် ချုပ်နှောင်ခံထားရတာလည်း ကံကောင်းမှုတော့ မဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူး .. ဒါကလည်း ၀ဋ်ကြွေး တမျိုး ..
ဟိုတနေ့ကလည်း အဲဒီသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ပင်လယ်စာ သွားစားဖြစ်တယ် .. ဘူဂစ်မှာပေါ့ .. အဲဒီ လမ်းထဲ ၀င်ဝင်သွားချင်း စိတ်ထဲ ဖြစ်လာတာက အဲဒီမှာ လူတွေကတော့ ပျော်ပါးပြီး စားနေတယ် .. အစားခံရမယ့် သတ္တ၀ါတွေအတွက် ဒီနေရာက ငရဲခန်းပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ .. အဲဒီနေ့က ပုဇွန်တောင် စားမလာဖြစ်ဘူး .. ဂဏာန်းလည်း အစတည်းက မကြိုက်တတ်ပါဘူး .. စားဖြစ်တာက ရယ်ဒီမိတ် ကြက်သားချောင်း ငါးလုံး အဲဒါတွေပဲ စားဖြစ်တယ် .. သူငယ်ချင်းကတော့ပြောတယ် .. နင်စားပုံနဲ့ မတန်ဘူးတဲ့ .. (ပင်လယ်စာ စားမယ်ဆိုတိုင်း ရတဲ့ ဆိုက်ကိုပါပဲ :D)
မိုးခါး ကျန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ် တနင်္လာကစပြီး အလုပ်သစ် ၀င်ပါတယ် .. အလုပ်သစ်ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း အပိုးကျိုးကျိုးလေးပေါ့ .. :D ကံတရား ကိုယ့်ဘက်မပါပုံများ နောက်မှာ ဒါရိုက်ဘော့စ်က ထိုင်သလို ကင်မရာကလည်း နောက်တည့်တည့်မှာပါ .. ဒီလိုနဲ့ သိပ်မလစ်တော့ လုပ်နေကျ ဘလော့ဂင်းအလုပ်ကို ခေတ္တ ခဏ အရှိန် သတ်ထားရပါတယ် .. (ခိုးပြီး ရေးရတာ ဖီလင်မလာဘူးလေ .. ရေးတဲ့ စာထဲ မျောသွားတဲ့အချိန် သူဌေးမြင်သွား ဒုက္ခ :P) အဲဒါနဲ့ ဒီလိုနဲ့ လစ်ရင်လစ်သလို စာဖတ်လိုက် .. မန့်လိုက် .. ချက်ထဲ အတင်းချလိုက် .. ဒီထက်ပိုလစ်ရင် အပင်လေး ၀င်စိုက်လိုက် .. စားသောက်ဆိုင်ကလည်း ပစ်ထားလို့ မရတော့ ၀င်ထိန်းသိမ်းလိုက်နဲ့ .. ဒီလောက်လေးပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ် .. :P (ပြောချင်တာက ဒါကြောင့် စာမရေးဖြစ်သေးတာပါလို့ .. :D)
ပြီးတော့ အလုပ်နဲ့ အိမ်နဲ့ တအားဝေးလို့ အိမ်လည်းပြောင်းရပါတယ် .. (အိမ်တက် မလုပ်ဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ .. :P) (နောက်တာ မဟုတ်ပါဘူး .. တကယ်ကို မလုပ်တာ :P) မဟုတ်ရင် မေသူတို့ ဖူလတန် ဆိုပြီး လာအော်မှာဆိုးလို့ :P အခုတော့ ဒီဂလောက်ပါပဲ ..း))
ရေးသားသူ မိုးခါး at 11/18/2009 03:12:00 PM
အကြောင်းအရာခွဲ ဖြစ်သမျှအလွဲများ, ဟိုရောက် ဒီရောက်, အတွေ့အကြုံ